Caruur iskuulley ah oo lagu xiray Kenya - BBC Somali
Caruur iskuulley ah oo lagu xiray Kenya
Image caption Bishii April weerar ka dhacay Garissa waxaa ku dhimatay 148 qof.
Booliska dalkani Kenya ayaa waxa ay xireen afar ardey ah oo lagu eedeynaayo inay maleegayeen weerar argagixiso oo ay iskuul ku qaadaan.
Wiilasha oo da’dooda ay u dhexeyso, 13 illaa 16 sano, waxa ay dhigtaan fasalka sideedaad ee iskuul lagu magacaabo St Kizito oo ku yaalla bariga Kenya.
Iskuulka ay caruurtan dhigtaan waxaa maalgeliya kaniisadda Catholic.
Booliska waxa ay sheegayaan in wiilashan ay si isdaba jog ah ay fasalka uga maqnaayeen dhowr maalin.
Waxaa sidoo kale lagu eedeynayaan in waqti badan ay ku bixinayeen xarun internetka laga isticmaalo.